3 Siyaabaha Bedelka Voice cadaymaha ka iPhone in Computer
Mail Voice wax yaabahan aad u sahlan, taas oo noo ogolaadaa in baaq loo diro Qaramada duubay si addressees naga kaliya dhowr ilbiriqsi gudahood. Sida inta badan jecel yahay fariimaha qoraalka ah oo fudud, mararka qaarkood mail cod badan yahay ka fiican. Sida caadiga ah fariimahaas oo kale ay yihiin halkii qof ahaaneed, rabitaanka dhalashadiisa, hambalyo iwm awgeed, aad rabto inta badan si loo badbaadiyo xusuusahaasi in ay naga computer loogu isticmaalo mustaqbalka. In fudud hagahan waan sharxi doonaa sida ay u gudbiyaan qoraal cod iPhone in computer via Emails iyo MMS iyo sidoo kale kaala talin software yar oo waxtar leh oo aad ku caawin kara, taas aawadeed.
Habka 1. Transfer iPhone Voice cadaymaha via Email / MMS
Tag Voice cadaymaha app
Dooro qoraal aad rabto in aad soo dirto.
Tubada badhanka Share on
Hadda waxaad dooran kartaa in ay u soo dirto qoraal via email ama farriin. Just raac tilmaamaha shaashadda!
Habka 2. Transfer Voice cadaymaha ka iPhone in Computer via Lugood
Connect aad iPhone via USB-cable iyo furi Lugood.
Dooro iPhone in menu ugu weyn.
Open bookmark Music iyo sax sanduuqa ah ee soo socota si ay u dar goob Voice Deymaha maqan.
Synchronise music adiga oo riixaya badhanka codso.
Deymaha maqan Your ka dhex muuqan doonaa liiska Music ah! (Waxa aad heli kartaa file dhabta ah audio si fudud ay xaq u-gujinaya qoraal ah)
Habka 3. Top 3 Lugood Badeli kara ee iphone Voice Memo beddelashada
Price: $39.95 Size: 29.91M Ajandooyinka: Mac dulmar kooban: Iyadoo Wondershare TunesGo (Mac), waxaad ka iPhone wareejin karaan cadaymaha cod Mac 3 talaabooyin fudud. Ka sokow, si aad u computer iyo ku xigeenka qeybsanaan ku wareejin karaa qaabab kala duwan file ka duwan iphone.
Waxaad u maamuli kartaa music jecel, filimada, podcasts, cadaymaha cod, buugaag iyo xitaa ka sii badan, oo dhan ee qasabno yar! Software waa la jaan qaada Lugood, laakiin sidoo kale si gaar ah u shaqayn karo. Intaa waxaa dheer, TunesGo si toos ah loogu badalo files qaababka, la jaan qaada qalabka Apple, sidaa darteed uma baahnid in aad walwasho ku saabsan in! TunesGo - doorasho fiican ee maaraynta xogta iyo wareejinta dhexeeya qalabka aad!
Raac tallaabooyinka hoose:
Tallaabada 1. Download iyo rakibi TunesGo Wondershare on Mac Tallaabada 2. Connect iphone la Mac via cable USB ah Tallaabada 3. Transfer qoraal cod iPhone si Mac
In daaqadaha aasaasiga ah, guji Voice cadaymaha khaanadda bidix u muujiyo oo dhan cadaymaha cod. Hubi cadaymaha codka in aad rabto in lagu wareejiyo ka iPhone si Mac oo guji "Dhoofinta" ah.
Price: laga bilaabo $34.99 Size: 10 MB Ajandooyinka: Windows & Mac dulmar kooban: iExplorer u ogolaanaya in ay si fudud u abaabulo cadaymaha codkaaga, qoraalka iyo fariimahu. Si fudud u dhoofiyaan fariimaha aad badbaadisay in computer ama iyaga badalo galay dheeraad ah qaabab anfacaya: .pdf, .csv, .txt iwm Sidoo kale, waxaad si fudud dib kartaa taariikhda qoraalka iyo dib u eego, marka loo baahdo. Barnaamijku wuxuu hubinayaa in tayada lahayn lagu lumin doonaa marka wareejinta cadaymaha cod, sidaa darteed looma baahna in laga walwalo in. Waxaa xitaa soo celin kartaa fariimaha aad badiyay xaaladaha qaarkood. Marka laga reebo fariimaha, iExplorer waa tababare aad u xog wax ku ool ah, taas oo u saamaxaaya in ay nidaaminta xogta aad ee habka ugu haboon.
Price: $ 19.95 (version lacag la'aan ah sidoo kale waa la heli karo) Size: 30.3 MB Ajandooyinka: Windows dulmar kooban: software kale ee maamulka xogta iyo wareejinta faylasha u dhexeeya iPhone iyo PC. Waxaa loo baahan Lugood in lagu xiro on your computer. Voice cadaymaha si fudud ayaa loo gudbin karaa oo kaliya dhowr tallaabo oo dareen fudud. Waa maxay dheeraad ah, ma cadaymaha cod oo keliya ayaa loo gudbin karaa, SynciOS kaloo ka caawisaa si loo badbaadiyo kale multimedia files, barnaamijyadooda, sawiro iyo ka badan. Macruufka audio / video Converter waxaa sidoo kale ka mid ah ee aannu ku dhaw raaxadeeda. Version mushaarka badan ma qabto wax xayeysiis dhibsado oo u qalma in mid ka mid ah lacag la'aan ah.
> Resource > Mac > Sida loo Copy Voice cadaymaha ka iPhone si Mac